Umaki: amanani | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11, i-2020 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11, i-2020 UPete Eppele
Njengoba umhlaba wanamuhla ubeka ukubaluleka okwandayo ngejubane nokuguquguquka, amandla okufaka isikhathi sangempela, amanani entengo afanele kanye nokuholwa kokuthengisa eziteshini zabo zokuthengisa kunganikeza amabhizinisi isandla esiphakeme kulabo ancintisana nabo uma kukhulunywa ngokuhlangabezana nokulindelwe kwamakhasimende. Vele, njengoba izidingo zokusebenza zanda, kanjalo nobunzima bebhizinisi. Izimo zemakethe namandla okushintsha kwebhizinisi ayashintsha ngesivinini esiya ngokuya sishesha, okushiya izinkampani zilwela ukuphendula ezintweni ezibanga izintengo
I-psychology engemuva kwe-ecommerce iyamangalisa impela. Ngingumuntu othanda ukuthenga online futhi ngivame ukumangazwa yizo zonke izinto engizithengayo ebengingazidingi kodwa bekupholile nje noma kuyinto enhle kakhulu ukuthi ungadlula! Le infographic evela ku-Wikibuy, i-13 Psychological Pricing Hacks ukukhulisa ukuthengisa, ichaza umthelela wamanani entengo nokuthi indlela yokuziphatha ithengwa kanjani kalula ngama-tweaks amancane. Intengo yezengqondo iyasebenza
E-IRCE, ngikwazile ukuhlala phansi noMihir Kittur, umsunguli obambisene noMphathi Omkhulu Wezokusungula e-Ugam, inkundla enkulu yokuhlaziya idatha enika amandla izinkampani zezentengiselwano ukuthi zenze izinto zesikhathi sangempela ezandisa ukusebenza kwemali engenayo. I-Ugam yethule kulo mcimbi ukuxoxa ngamanani entengo nokuthi izinkampani zingazivikela kanjani izimpi zamanani entengo. Ngokusebenzisa amasiginali wokufunwa kwabathengi aqoqwe ku-inthanethi futhi abakhele amasu entengo amaklayenti abo, i-Ugam ikwazile ukwenza ngcono ukusebenza kwesigaba ngo-
NgoLwesibili, Okthoba 9, 2012 Douglas Karr
I-ecommerce yisayensi - kepha akuyona imfihlakalo. Abathengisi abahamba phambili kwi-inthanethi basivulele indlela sonke ngokusebenzisa izinkulungwane zamasu wokuhlola nokunikezela ngemininingwane eminingi ukuze abanye babone futhi bafunde kuyo. Namuhla, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yenani labantu abasebenzisa i-inthanethi abathenga ku-inthanethi. Kubathengisi, le nombolo ifakazela amandla akhulayo okuthengisa online. Ukuheha laba abathengi abaxhunyiwe, abathengisi kumele benze ukuthenga kwiwebhusayithi yabo kube mnandi,